Fantasy – Alpha Premium
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022) ##unicode မှော်အကောင်လေးတွေနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Fantastic Beasts ဇာတ်ကားရဲ့ သုံးကားမြောက် အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ဇာတ်ကားကို အားပေးလို့ရပါပြီနော် စုန်းဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဒီဇာတ်ကားကလည်း နာမည်ကြီးတဲ့ကားဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်တမ်း ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားပါပဲ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ လူသားမယ်ဂယ်လောကကို ဒုက္ခပေးပြီး သတ်ဖြတ်နေခဲ့တဲ့ ဂရင်ဒယ်ဝေါက လူသားကမ္ဘာနဲ့ စုန်းကမ္ဘာ နှစ်ခုလုံးကို ဖျက်စီးဖို့ကြံစည်နေခဲ့ပါတယ် စုန်းဝန်ကြီးရုံးကလူတွေကလည်း သူနဲ့ အလိုတူအလိုပါဖြစ်ပြီး မယ်ဂယ်တွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့အမှုတွေကနေ သူ့ကို လွတ်ကင်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် ဂရင်ဒယ်ဝေါကို တားဆီးဖို့အတွက် မှော်ဆရာ အယ်ဘတ်စ်ဒမ်ဘယ်ဒေါက မှော်အကောင်လေးတွေအကြောင်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ နုဒ်နဲ့ အခြားစုန်းတွေကို အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ် သူတို့အဖွဲ့ မှော်ဆရာဂရင်ဒယ်ဝေါရဲ့အန္တရာယ်ကို ဘယ်လိုတားဆီးသွားမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်လို့ ခံစားကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ေမွာ္အေကာင္ေလးေတြနဲ႔ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ Fantastic Beasts ဇာတ္ကားရဲ႕ သုံးကားေျမာက္ အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ ဇာတ္ကားကို အားေပးလို႔ရပါၿပီေနာ္ စုန္းဇာတ္ကားေတြထဲမွာ ဒီဇာတ္ကားကလည္း နာမည္ႀကီးတဲ့ကားျဖစ္လို႔ လက္မလႊတ္တမ္း ၾကည့္သင့္တဲ့ဇာတ္ကားပါပဲ ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ လူသားမယ္ဂယ္ေလာကကို ဒုကၡေပးၿပီး သတ္ျဖတ္ေနခဲ့တဲ့ ဂရင္ဒယ္ေဝါက လူသားကမာၻနဲ႔ စုန္းကမာၻ ႏွစ္ခုလုံးကို ဖ်က္စီးဖို႔ႀကံစည္ေနခဲ့ပါတယ္ စုန္းဝန္ႀကီး႐ုံးကလူေတြကလည္း သူနဲ႔ အလိုတူအလိုပါျဖစ္ၿပီး မယ္ဂယ္ေတြကို သတ္ျဖတ္တဲ့အမႈေတြကေန သူ႔ကို လြတ္ကင္းခြင့္ေပးလိုက္ပါတယ္ ...
IMDB: 6.5/10 46,503 votes
Supercool (2022) (App member only) ##unicode ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကြည့်ရူမယ့် အထက်တန်းကျောင်းဟာသဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် အလွဲတွေကိုလုပ်တတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လူငယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ ကြည့်ပျော်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ နေးလ်နဲ့ဂေဘက်က အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေပေါ့ ဂေဘက်က အတော်ရယ်ရတဲ့ကောင်လေးပါ လူကဝ၊အသားမဲပေမယ့် ကောင်မလေးကကြောင်ချင်သေးတယ် ဂေဘက်ရဲ့ဟာသအလွဲတွေက ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ နေးလ်ကတော့ ကျောင်းမှာပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ ဆမ်မားဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုခွက်ရှ်နေခဲ့တာပေါ့ နေးလ်ကိုတော့ ကျောင်းမှာဘယ်သူမှမသိကြဘူး iPadတစ်လုံးနဲ့ပုံပဲဆွဲနေတဲ့အရူံးသမားလို့သိထားကြတော့ နေးလ်က ဆမ်မားအနားကိုမကပ်ရဲဘူး တစ်နေ့ကျ ဆမ်မားရဲ့မွေးနေ့ပါတီရှိတော့ ဂေဘက်က နေးလ်ကိုမြှောက်ပေးတယ် ဆမ်မားနဲ့စကားပြောလိုက် မင်းကိုဖိတ်မှာဆိုပြီး၊ ဒါနဲ့ နေးလ်က စကားသွားပြောပါရော စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ ဆမ်မားအပေါ်အန်ချလိုက်တဲ့နောက်မှာ ခွက်ရှ်နဲ့ဝေးပါပြီဆိုပြီးစိတ်ညစ်ခဲ့တဲ့နေးလ်တစ်ယောက် သူက ရုပ်ချောတဲ့ကောင်လေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် သူ့ဆုတောင်းတွေအမှန်ဖြစ်လာပြီး နေးလ်တစ်ယောက် ရုပ်ချောပြီးလန်းတဲ့ကောင်လေးအဖြစ် နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ရုပ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့…. ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာဆက်လက်ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ၾကည့္႐ူမယ့္ အထက္တန္းေက်ာင္းဟာသဇာတ္ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ အလြဲေတြကိုလုပ္တတ္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ လူငယ္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးကိုျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္လို႔ ၾကည့္ေပ်ာ္တဲ့ဇာတ္ကားတစ္ကားပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ေနးလ္နဲ႔ေဂဘက္က အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းေတြေပါ့ ေဂဘက္က အေတာ္ရယ္ရတဲ့ေကာင္ေလးပါ လူကဝ၊အသားမဲေပမယ့္ ေကာင္မေလးကေၾကာင္ခ်င္ေသးတယ္ ေဂဘက္ရဲ႕ဟာသအလြဲေတြက ဒီဇာတ္ကားရဲ႕ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုပါပဲ ေနးလ္ကေတာ့ ေက်ာင္းမွာေပၚျပဴလာျဖစ္တဲ့ ဆမ္မားဆိုတဲ့ေကာင္မေလးကိုခြက္ရွ္ေနခဲ့တာေပါ့ ေနးလ္ကိုေတာ့ ေက်ာင္းမွာဘယ္သူမွမသိၾကဘူး iPadတစ္လုံးနဲ႔ပုံပဲဆြဲေနတဲ့အ႐ူံးသမားလို႔သိထားၾကေတာ့ ေနးလ္က ဆမ္မားအနားကိုမကပ္ရဲဘူး တစ္ေန႔က် ဆမ္မားရဲ႕ေမြးေန႔ပါတီရွိေတာ့ ေဂဘက္က ေနးလ္ကိုေျမႇာက္ေပးတယ္ ဆမ္မားနဲ႔စကားေျပာလိုက္ မင္းကိုဖိတ္မွာဆိုၿပီး၊ ဒါနဲ႔ ေနးလ္က စကားသြားေျပာပါေရာ စိတ္လႈပ္ရွားၿပီးေတာ့ ဆမ္မားအေပၚအန္ခ်လိုက္တဲ့ေနာက္မွာ ခြက္ရွ္နဲ႔ေဝးပါၿပီဆိုၿပီးစိတ္ညစ္ခဲ့တဲ့ေနးလ္တစ္ေယာက္ သူက ႐ုပ္ေခ်ာတဲ့ေကာင္ေလးျဖစ္ရင္ေကာင္းမွာပဲလို႔ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္ သူ႔ဆုေတာင္းေတြအမွန္ျဖစ္လာၿပီး ေနးလ္တစ္ေယာက္ ႐ုပ္ေခ်ာၿပီးလန္းတဲ့ေကာင္ေလးအျဖစ္ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္မွာ ႐ုပ္ေျပာင္းသြားတဲ့အခါမွာေတာ့…. ...
Child of Kamiari Month (2021) (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီတစ်ခါကြည့်ရှုရမဲ့ဇာတ်ကားကတော့ "Child of Kamiari Month" လို့ခေါ်တဲ့ animated filmလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့.....ခန်နာလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းသူလေးဟာ သူ့ရဲ့အမေဆုံးပါးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ အပြေးပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရခြင်းအပေါ်စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့နည်းလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူဟာ အီဒါတန်လို့ခေါ်တဲ့ ပြေးလွှားခြင်းနတ်ဘုရားဖြစ်ခဲ့တာကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ အမေလုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသောတာဝန်တွေဟာ သူ့အပေါ်ကျရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ခန်နာဟာ အီဇူမိုမှာ နတ်ဘုရားများစုဝေးကျင်းပမဲ့စားသောက်ပွဲကြီးအတွက် ဒေသမျိုးစုံမှအစားအစာများကို သယ်ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။အဲ့တာကြောင့် လမ်းခရီးတစ်လျှောက်လမ်းညွှန်ပြသရန်အတွက် နတ်ဘုရားများရဲ့သတင်းပို့ဆက်သားဟာလည်း ယုန်လေးရှီရိုရဲ့ခန္တာကိုယ်ကိုငှားကား ခန်နာနဲ့အတူလိုက်ပါလာပါတော့တယ်။ ခန်နာနဲ့ယုန်လေးတို့ဟာ ပွဲကျင်းမဲ့ညအမှီရောက်ရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမဲ့တာဝန်ကို အချိန်မှီပြီးစီးအောင်ကြိုးစားကြရင်း..... အီဒါတန်များအပေါ်မှာ အာဃာတရှိနေသူနဲ့တွေဆုံတဲ့အခါမှာ ခန်နာဟာ အဲ့လိုအာဃာတတရားကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်ပေးမလဲ၊ စုဆောင်းမိလာတဲ့အစားအစာတွေကိုလုယက်ချင်သူနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုတွေများကျော်ဖြတ်သွားမလဲ၊ ပွဲအတွက်ရော အချိန်မှီရောက်ရှိသွားနိုင်မလားဆိုတာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည်ရှုကြရမှာပါ။ ခန်နာလိုကလေးတစ်ယောက်အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံတွေ့ရပုံ၊ ဝမ်းနည်းဖွယ်ဘဝဇာတ်ကြောင်းနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲစွန့်စားမှုများအကြောင်းကို စနစ်တကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုသူတွေအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါၾကည့္ရႈရမဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ "Child of Kamiari Month" လို႔ေခၚတဲ့ animated filmေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းထဲမွာေတာ့.....ခန္နာလို႔ေခၚတဲ့ေက်ာင္းသူေလးဟာ သူ႔ရဲ႕အေမဆုံးပါးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အ​ေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းအေပၚစိတ္အားထက္သန္မႈေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕အေမျဖစ္သူဟာ အီဒါတန္လို႔ေခၚတဲ့ ေျပးလႊားျခင္းနတ္ဘုရားျဖစ္ခဲ့တာကိုသိရွိၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အေမလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာတာဝန္ေတြဟာ သူ႔အေပၚက်ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ ခန္နာဟာ အီဇူမိုမွာ နတ္ဘုရားမ်ားစုေဝးက်င္းပမဲ့စားေသာက္ပြဲႀကီးအတြက္ ေဒသမ်ိဳးစုံမွအစားအစာမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေပးဖို႔ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။အဲ့တာေၾကာင့္ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္လမ္းၫႊန္ျပသရန္အတြက္ နတ္ဘုရားမ်ားရဲ႕သတင္းပို႔ဆက္သား​ဟာလည္း ယုန္ေလးရွီ႐ိုရဲ႕ခႏၲာကိုယ္ကိုငွားကား ခန္နာနဲ႔အတူလိုက္ပါလာပါေတာ့တယ္။ ခန္နာနဲ႔ယုန္ေလးတို႔ဟာ ပြဲက်င္းမဲ့ညအမွီေရာက္ရွိရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့တာဝန္ကို အခ်ိန္မွီၿပီးစီးေအာင္ႀကိဳးစားၾကရင္း..... အီဒါတန္မ်ားအေပၚမွာ အာဃာတရွိေနသူနဲ႔ေတြဆုံတဲ့အခါမွာ ခန္နာဟာ ...
The Librarian III: The Curse of the Judas Chalice (2008) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါတင်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ "The Librarian III: The Curse of the Judas Chalice"ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဒီကားထဲမှာတော့ ဖလင်းရဲ့စွန့်စားခန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ဖလင်းဟာ စာကြည့်တိုက်မှူးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အရေးကြီးတာဝန်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့ကောင်မလေးရဲ့ထားသွားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဖလင်းဟာ စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားမှုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ အနားယူရင်း အားလပ်ရက်ခရီးထွက်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။အားလပ်ရက်ခရီးထွက်ရင်း ဖလင်းဟာ အဆိုတော်မလေးစီမွန်နဲ့ တွေ့ဆုံချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။စီမွန်ဟာ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်မဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ Judas Chalice ကိုရယူနိုင်မည့်ပစ္စည်းကို စောင့်ရှောက်နေရတဲ့သူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲ ကူဘီချက်ခ်တို့အဖွဲ့ဟာ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်တွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ စားတော်ခွက်ကိုရှာဖွေနေတဲ့သူေ တွ ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တာကြောင့် ဖလင်းရဲ့ ခရီးမှာ သူတို့အဖွဲနဲ့တွေဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ.... ဖလင်းတစ်ယောက် အားလပ်ရပ်ခရီးထွက်လာရာကနေ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်တွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းမဲ့ အခြေအနေကနေ စီမွန်နဲ့အတူ တားဆီးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့..... ဖလင်းတို့ကပဲ အခြေအနေကိုတားဆီးနိုင်သွားမလား၊ စီမွန်ကရောဘာတွေ ဖုံးကွယ်ထားသေးသလဲ၊ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြမလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှူရမှာပါ။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါတင္ေပးထားတဲ့ ဇာတ္ကားကေတာ့ "The Librarian III: The Curse of the Judas Chalice"ဆိုတဲ့အဂၤလိပ္ဇာတ္ကားေလးပါ။ ဒီကားထဲမွာေတာ့ ဖလင္းရဲ႕စြန္႔စားခန္းေတြကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာပါ။ ဖလင္းဟာ စာၾကည့္တိုက္မႉးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေရးႀကီးတာဝန္တစ္ခုကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ သူ႔ေကာင္မေလးရဲ႕ထားသြားျခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။အဲ့ဒီလိုနဲ႔ ဖလင္းဟာ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားမႈျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ အနားယူရင္း အားလပ္ရက္ခရီးထြက္ဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္။အားလပ္ရက္ခရီးထြက္ရင္း ...
IMDB: 6.5/10 12,494 votes
The Librarian II: Return to King Solomon’s Mines (2006) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါကြည့်ရှုရမဲ့ဇာတ်ကားကတော့ "The Librarian II: Return to King Solomon's Mines"ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဒီကားထဲမှာလည်း စာကြည့်တိုက်မှူးဖလင်းရဲ့စွန့်စားခန်းကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့..... ဖလင်းဟာ သလင်းကျောက်ဦးခေါင်းခွံတစ်ခုကို ရယူလာနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ King Solomonရဲ့ ရတနာတွေရှိရာနေရာကိုပြသနေတဲ့မြေပုံတစ်ခုကို စာတိုက်မှရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမြေပုံအခိုးခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဂျဒ်ဆန်ဟာ King Solomonရဲ့စာအုပ်အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီး မြေပုံကိုပြန်ယူလာခဲ့ပေးဖို့ ဖလင်းကိုတာဝန်ပေးပါတော့တယ်။မြေပုံဟာ ဝှက်စာဖော်ဖို့မြေပုံရှင်းလင်းချက်မပါရင် အသုံးမဝင်တဲ့အတွက် ဖလင်းဟာလည်း ရှာဖွေရေးခရီးစဉ်စတင်ရင်း ရှေးဟောင်းတူးဖော်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေတဲ့ ပရော်ဖက်ဆာအမ်မလီနဲ့တွေဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းဆုံမိသွားရင်း အတူတကွစွန့်စွန့်စားစား ခရီးထွက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့..... နှစ်ယောက်သားအနှောက်အယှက်အဟန့်အတားတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲ၊ အသက်အန္တရာယ်ပေးသူတွေလက်ထဲကနေဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ကြမလဲ၊ မထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တွေ့ကြုံရတာကိုရော ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ပြီးအနိုင်ယူသွားမလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာ အပြည့်အဝဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါနော်။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါၾကည့္ရႈရမဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ "The Librarian II: Return to King Solomon's Mines"ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးပါ။ ဒီကားထဲမွာလည္း စာၾကည့္တိုက္မႉးဖလင္းရဲ႕စြန္႔စားခန္းကို စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းထဲမွာေတာ့..... ဖလင္းဟာ သလင္းေက်ာက္ဦးေခါင္းခြံတစ္ခုကို ရယူလာႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ King Solomonရဲ႕ ရတနာေတြရွိရာေနရာကိုျပသေနတဲ့ေျမပုံတစ္ခုကို စာတိုက္မွရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေျမပုံအခိုးခံလိုက္ရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ဂ်ဒ္ဆန္ဟာ King Solomonရဲ႕စာအုပ္အေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ၿပီး ေျမပုံကိုျပန္ယူလာခဲ့ေပးဖို႔ ဖလင္းကိုတာဝန္ေပးပါေတာ့တယ္။ေျမပုံဟာ ဝွက္စာေဖာ္ဖို႔ေျမပုံရွင္းလင္းခ်က္မပါရင္ အသုံးမဝင္တဲ့အတြက္ ဖလင္းဟာလည္း ရွာေဖြေရးခရီးစဥ္စတင္ရင္း ေရွးေဟာင္းတူးေဖာ္မႈတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ေနတဲ့ ပေရာ္ဖက္ဆာအမ္မလီနဲ႔ေတြဆုံခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းဆုံမိသြားရင္း အတူတကြစြန္႔စြန္႔စားစား ခရီးထြက္ဖို႔ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့..... ႏွစ္ေယာက္သားအေႏွာက္အယွက္အဟန္႔အတားေတြကိုဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ၾကမလဲ၊ အသက္အႏၲရာယ္ေပးသူေတြလက္ထဲကေနဘယ္လိုလြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကမလဲ၊ မထင္မွတ္ထားတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ေတြ႕ႀကဳံရတာကိုေရာ ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးအႏိုင္ယူသြားမလဲဆိုတာ ဇာတ္ကားထဲမွာ အျပည့္အဝဆက္လက္​ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါေနာ္။ Review – KKK File Size ...
IMDB: 6.2/10 13,618 votes
The Librarian II: Return to King Solomon’s Mines (2006)
The Tai Chi Master (2022) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ တရုတ်သိုင်းကားတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် "The Tai Chi Master(2022)"ဆိုတဲ့တရုတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ တစ်နေ့...တိုင်းတစ်ပါးမှရန်သူတွေဟာ တိုင်းပြည်ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်လာပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျန်းကျွင့်ပေါင်လို့ခေါ်တဲ့ဝူကျီဂိုဏ်းမှတပည့်တစ်ယောက်ဟာ စုံမင်းဆက်တိုင်းပြည်ရဲ့တပ်မှူးဖြစ်သူကိုကူညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွင့်ပေါင်ဟာ ဝူကျီဂိုဏ်းရဲ့ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲမှာ သူဟာ ကိုယ်ခံပညာပရိယာယ်တစ်မျိုးကိုသုံးခဲ့တဲ့အတွက် ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ဟာ အပြစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ သူ့ကိုစေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းမလှစွာပဲ အဲ့ဒီညမှာ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေဟာ အစွန်းရောက်ဂိုဏ်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ဝူကျီဂိုဏ်းကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့... ကျန်းကျွင့်ပေါင်ဟာ အခြားသောဂိုဏ်များနှင့်ပူးပေါင်းကာ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ဆောင်ရင်း မထင်မှတ်ထားတဲ့လျှို့ဝှက်ကြံစဉ်မှုတွေကိုပါတွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားမလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်၊ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအတိုက်အခိုက်ခန်းတွေပါဝင်လို့ တရုတ်ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေလည်း လတ်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ တ႐ုတ္သိုင္းကား​ေတြကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့သူေတြအတြက္လည္း စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ၾကည့္ရႈႏိုင္မယ့္ "The Tai Chi Master(2022)"ဆိုတဲ့တ႐ုတ္ကားေလးကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ တစ္ေန႔...တိုင္းတစ္ပါးမွရန္သူေတြဟာ တိုင္းျပည္ကိုလာေရာက္တိုက္ခိုက္လာပါတယ္။ အဲဲဒီအခါမွာ က်န္းကြၽင့္ေပါင္လို႔ေခၚတဲ့ဝူက်ီဂိုဏ္းမွတပည့္တစ္ေယာက္ဟာ စုံမင္းဆက္တိုင္းျပည္ရဲ႕တပ္မႉးျဖစ္သူကိုကူညီတိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုတိုက္ခိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြၽင့္ေပါင္ဟာ ဝူက်ီဂိုဏ္းရဲ႕ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲမွာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီပြဲမွာ သူဟာ ကိုယ္ခံပညာပရိယာယ္တစ္မ်ိဳးကိုသုံးခဲ့တဲ့အတြက္ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ဟာ အျပစ္ကိုျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႔ သူ႔ကိုေစခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းမလွစြာပဲ အဲ့ဒီညမွာ တိုင္းတစ္ပါးသားေတြဟာ အစြန္းေရာက္ဂိုဏ္းနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ဝူက်ီဂိုဏ္းကိုစီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔... က်န္းကြၽင့္ေပါင္ဟာ အျခားေသာဂိုဏ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ရင္း မထင္မွတ္ထားတဲ့လွ်ိဳ႕ဝွက္ႀကံစဥ္မႈေတြကိုပါေတြ႕ႀကဳံလာရတဲ့အခါမွာေတာ့ ဘယ္လိုေတြရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားသြားမလဲဆိုတာ ဇာတ္ကားထဲမွာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာပါ။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္၊ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာအတိုက္အခိုက္ခန္းေတြပါဝင္လို႔ တ႐ုတ္႐ုပ္ရွင္ကားေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့သူေတြလည္း လတ္မလႊတ္တမ္းၾကည့္ရႈသင့္တဲ့ဇာတ္ကားတစ္ကားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ Review – KKK File Size ...
IMDB: 6.5/10 1420 votes
Necromancer (2005) (App member only) ##unicode Necromancerဇာတ်ကားကတော့ 1996က ရဲတွေသတ်တာခံခဲ့ရတဲ့ မူးယစ်ဆေးကုန်သည်တွေအကြောင်းကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ရဲသားSantiက ရာဇဝတ်သားတွေကို လက်ရဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့လက်ထဲကလွှတ်သွားတဲ့ ရာဇဝတ်သားဆိုတာက မရှိသလောက်ပါပဲ။‌ တစ်နေ့မှာဘန်ကောက်က အရာရှိတစ်ယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ ထောင်ဖောက်ပြေးသွားတဲ့ ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်က Santiတို့နယ်မြို့လေးကိုရောက်နေကြောင်းနဲ့ သူထောင်ဖောက်ပြေးသွားတာကို သတင်းထောက်တွေမသိခင် တိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးပေးဖို့ Santiကို တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ထောင်ဖောက်ပြေးတဲ့အမှုတစ်ခုလို့ဘဲထင်ခဲ့တဲ့ Santiတစ်ယောက်ဟာ အမှုကိုလိုက်စုံစမ်းချိန်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ တွေ့ကြုံရပါတော့တယ်။ ထောင်ဖောက်ပြေးသွားတဲ့ရာဇဝတ်သားဟာ ရဲဝန်‌ထမ်းဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောက်လမ်းဆရာတစ်ယောက်လဲဖြစ်နေတာကြောင့် Santiတစ်ယောက် ဒီရာဇဝတ်သားကိုဖမ်းနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Necromancerဇာတ္ကားကေတာ့ 1996က ရဲေတြသတ္တာခံခဲ့ရတဲ့ မူးယစ္ေဆးကုန္သည္ေတြအေၾကာင္းကို အေျခခံၿပီး႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ရဲသားSantiက ရာဇ၀တ္သားေတြကို လက္ရဖမ္းဆီးတဲ့ေနရာမွာထူးခြၽန္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ႔လက္ထဲကလႊတ္သြားတဲ့ ရာဇ၀တ္သားဆိုတာက မရွိသေလာက္ပါပဲ။‌ တစ္ေန႔မွာဘန္ေကာက္က အရာရွိတစ္ေယာက္ကေရာက္လာၿပီးေတာ့ ေထာင္ေဖာက္ေျပးသြားတဲ့ ရာဇ၀တ္သားတစ္ေယာက္က Santiတို႔နယ္ၿမိဳ႕ေလးကိုေရာက္ေနေၾကာင္းနဲ႔ သူေထာင္ေဖာက္ေျပးသြားတာကို သတင္းေထာက္ေတြမသိခင္ တိတ္တဆိတ္ဖမ္းဆီးေပးဖို႔ Santiကို တာ၀န္ေပးခဲ့ပါတယ္။ပုံမွန္ေထာင္ေဖာက္ေျပးတဲ့အမႈတစ္ခုလို႔ဘဲထင္ခဲ့တဲ့ Santiတစ္ေယာက္ဟာ အမႈကိုလိုက္စုံစမ္းခ်ိန္မွာ ထူးဆန္းတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံရပါေတာ့တယ္။ ေထာင္ေဖာက္ေျပးသြားတဲ့ရာဇ၀တ္သားဟာ ရဲ၀န္‌ထမ္းေဟာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္လမ္းဆရာတစ္ေယာက္လဲျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ Santiတစ္ေယာက္ ဒီရာဇ၀တ္သားကိုဖမ္းႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Crime,Fantasy,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated ...
IMDB: 5.6/10 300 votes
Eternals (2021) ##unicode Marvel ပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Eternals ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားသစ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အားလုံးလည်းသိထားကြတဲ့အတိုင်းကိုရီးယားမင်းသားမာဒုံဆော့အပြင် မင်းသမီးကြီးအန်ဂျလီနာဂျိုလီပါပါဝင်ထားတဲ့ ဒီကားကြီးထဲမှာဆိုရင်တခြားနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးနဲ့ခမ်းခမ်းနားနားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူး တင်ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ကမ္ဘာကြီးအစတုန်းက အာရီရှမ်ဟာပထမဆုံးစကြာဝဠာတွေကိုဖန်တီးတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ ကောင်းကင် ရေ မြေ လေ အစရှိတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဟန်ချက်ညီညီတည်ဆောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်အာကာသရဲ့တွင်းနက်ကြီးထဲကနေ Deviant ဆိုတဲ့သားရဲကောင်ကြီးတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလူသားတွေရဲ့ ကမ္ဘာကြီး ဟန်ချက်ညီမှုပျက်စီးတော့မလိုဖြစ်လာပါတယ် ဒါနဲ့အာရီရှန်ဆိုတဲ့ဖန်တီးသူဟာ စကြာဝဠာကြီးပြန်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အီတာနယ်တွေကိုပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ် အီတာနယ်တွေဆိုတာကတော့ထာဝရရှင်သန်သူတွေဖြစ်ပြီး လူသားတွေထက်အဆပေါင် များစွာကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ် ဒါပေမယ့်တာဝန်တစ်ခုမှာတော့ခေါင်းဆောင်အီတာနယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အေဂျက်ဟာပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ် သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုလျှို့ဝှက်ချက်နောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်တွေရှိနေလဲ သူတို့ရဲ့တာဝန်တွေကရောထင်ထားသလိုလူသားတွေကိုစောင့်ရှောက်ရုံသက်သက်ပဲလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi Marvel ပရိသတ္ေတြအားလုံးေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ Eternals ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားသစ္ေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ အားလုံးလည္းသိထားၾကတဲ့အတိုင္းကိုရီးယားမင္းသားမာဒုံေဆာ့အျပင္ မင္းသမီးႀကီးအန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီပါပါဝင္ထားတဲ့ ဒီကားႀကီးထဲမွာဆိုရင္တျခားနာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလည္းအမ်ားႀကီးနဲ႔ခမ္းခမ္းနားနားစိတ္ဝင္စားဖြယ္႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ကမာၻႀကီးအစတုန္းက အာရီရွမ္ဟာပထမဆုံးစၾကာဝဠာေတြကိုဖန္တီးတဲ့သူျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းကင္ ေရ ေျမ ေလ အစရွိတဲ့အရာအားလုံးနဲ႔ကမာၻႀကီးကိုဟန္ခ်က္ညီညီတည္ေဆာက္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္အာကာသရဲ႕တြင္းနက္ႀကီးထဲကေန Deviant ဆိုတဲ့သားရဲေကာင္ႀကီးေတြထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာလူသားေတြရဲ႕ ကမာၻႀကီး ဟန္ခ်က္ညီမႈပ်က္စီးေတာ့မလိုျဖစ္လာပါတယ္ ဒါနဲ႔အာရီရွန္ဆိုတဲ့ဖန္တီးသူဟာ စၾကာဝဠာႀကီးျပန္ၿပီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္အီတာနယ္ေတြကိုပို႔ေဆာင္လိုက္ပါတယ္ အီတာနယ္ေတြဆိုတာကေတာ့ထာဝရရွင္သန္သူေတြျဖစ္ၿပီး လူသားေတြထက္အဆေပါင္ မ်ားစြာႀကီးမားတဲ့စြမ္းအင္ေတြကိုပိုင္ဆိုင္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္တာဝန္တစ္ခုမွာေတာ့ေခါင္းေဆာင္အီတာနယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ေအဂ်က္ဟာေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္ သူ႔ရဲ႕ေျပာင္းလဲမႈလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေနာက္ကြယ္မွာဘယ္လိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြရွိေနလဲ သူတို႔ရဲ႕တာဝန္ေတြကေရာထင္ထားသလိုလူသားေတြကိုေစာင့္ေရွာက္႐ုံသက္သက္ပဲလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.5GB,2.7GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Action,Aventure,Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 6.8/10 118,187 votes
Ghostbusters: Afterlife (2021) ##unicode Ghostbustersဇာတ်ကားတွေဆိုတာ တစ်ချိန်ကနာမည်ကြီးအရှိန်ရခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခါမှာတော့ ၃၂နှစ်ကြာမှ Ghostbusters Afterlifeဆိုပြီး ပြန်လည်ထွက်ရှိလာပါတယ် Ant-Man မင်းသား Paul Rudd ၊ Strangers thingsထဲက Fin Wolfhardတို့အပြင် အခြားနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ထားပြီး အရင်သရုပ်ဆောင်တွေလည်းပြန်လည်ပါဝင်ထားတာမို့ နာမည်ကြီးတွေချည်းစုနေတဲ့ဇာတ်ကားပါပဲ အခုကားမှာတော့ ghostbustersအဖွဲ့ကကွဲသွားခဲ့ပြီး ghostbusterဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Egonကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့် အီဂွန်ရဲ့သမီးဖြစ်သူနဲ့ သူ့ရဲ့မြေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖီဘီနဲ့ထရက်ဗာက အမွေကျန်ခဲ့တဲ့အိမ်နဲ့ခြံအဟောင်းကြီးဆီကိုပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ် ဖီဘီနဲ့ထရက်ဗာကတော့ သူတို့အဘိုးဟာ တစ္ဆေဖမ်းတဲ့လူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူး သူ့အဘိုးရဲ့အမွေအိမ်ကြီးကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ တစ်ဖြေးဖြေးချင်းနဲ့ သူ့အဘိုးရဲ့သရုပ်မှန်ကိုသိလာခဲ့တာပါ သူ့အဘိုးရဲ့လျို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ကြုံလာရတော့မယ့် ဘေးအန္တရာယ်ကြီးကို တစ္ဆေဖမ်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့မြေးဖြစ်သူတွေပီပီ ဘယ်လိုအမွေဆက်ဆံပြီးကာကွယ်ဦးမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်တာမို့ ခံစားအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi Ghostbustersဇာတ္ကားေတြဆိုတာ တစ္ခ်ိန္ကနာမည္ႀကီးအရွိန္ရခဲ့တဲ့ဇာတ္ကားေတြျဖစ္ၿပီး ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ၃၂ႏွစ္ၾကာမွ Ghostbusters Afterlifeဆိုၿပီး ျပန္လည္ထြက္ရွိလာပါတယ္ Ant-Man မင္းသား Paul Rudd ၊ Strangers thingsထဲက Fin Wolfhardတို႔အျပင္ အျခားနာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြပါဝင္ထားၿပီး အရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလည္းျပန္လည္ပါဝင္ထားတာမို႔ နာမည္ႀကီးေတြခ်ည္းစုေနတဲ့ဇာတ္ကားပါပဲ အခုကားမွာေတာ့ ghostbustersအဖြဲ႕ကကြဲသြားခဲ့ၿပီး ghostbusterေဟာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Egonကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ အီဂြန္ရဲ႕သမီးျဖစ္သူနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေျမးႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဖီဘီနဲ႔ထရက္ဗာက အေမြက်န္ခဲ့တဲ့အိမ္နဲ႔ၿခံအေဟာင္းႀကီးဆီကိုေျပာင္းလာခဲ့ၾကပါတယ္ ဖီဘီနဲ႔ထရက္ဗာကေတာ့ သူတို႔အဘိုးဟာ တေစၦဖမ္းတဲ့လူျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူး သူ႔အဘိုးရဲ႕အေမြအိမ္ႀကီးကိုေျပာင္းလာတဲ့အခါမွထူးဆန္းတဲ့အရာေတြကိုႀကဳံေတြ႕လာရတဲ့အခါ တစ္ေျဖးေျဖးခ်င္းနဲ႔ သူ႔အဘိုးရဲ႕သ႐ုပ္မွန္ကိုသိလာခဲ့တာပါ သူ႔အဘိုးရဲ႕လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ႀကဳံလာရေတာ့မယ့္ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးကို တေစၦဖမ္းသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ေျမးျဖစ္သူေတြပီပီ ဘယ္လိုအေမြဆက္ဆံၿပီးကာကြယ္ဦးမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ္ကားမွာျမင္ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္တာမို႔ ခံစားအားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – ...
IMDB: 7.6/10 42,333 votes
The Magic Lotus Lantern (2021) (App member only) ##unicode The Magic Lotus Lanternဇာတ်ကားမှာတော့ Yang Jianဟာ နတ်ဘုရားမနဲ့လူသားတစ်ယောက်က မွေးဖွားလာသူဖြစ်တာကြောင့် ကောင်းကင်ဘုံက နတ်ဘုရားတွေက သူ့ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံကြတယ်။ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ရတနာပစ္စည်းကြာပန်းမီးအိမ်အခိုးခံရလိုက်တဲ့အတွက် အစောင့်အကြပ်တွေက Yang jianကိုသူခိုးလို့ထင်ကာ ဖမ်းဆီးကြတဲ့အတွက် Yang Jianတစ်ယောက်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ မသေမျိုးကမ္ဘာကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Wanlingမြို့က မိန်းမလှလေး Qingဟာ အကိုဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်နေသူပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ မြစ်ထဲမျှောလာတဲ့Yang jianကိုတွေ့ကာ ကယ်ဆယ်ပြီးအိမ်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ Yang Jianတစ်ယောက်ကတော့ မိမိကိုယ်မိမိမမှတ်မိတော့ဘဲ အတိတ်မေ့သွားတာကြောင့်Qingတို့မောင်နှမဟာ သူ့ကိုErlangဟု အမည်ပေးကာ အိမ်မှာနေစေခဲ့တယ်။ကြာပန်းမီးအိမ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက် ချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့ အမှောင်နတ်ဆိုးဟာ အားကောင်းလာခဲ့တဲ့အတွက် ကောင်းကင်ဘုံက နတ်ဘုရားတွေလဲ ခေါင်းခဲနေရတယ်။ Yang jianနဲ့ ကြာပန်းမီးအိမ်ကိုရှာဖွေအဖို့အတွက် ကောင်းကင်စစ်တပ်တွေကိုလဲ လူသားကမ္ဘာကိုပို့ထားသလို အမှောင်နတ်ဆိုးကလဲ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို လွှတ်ကာYang jianကိုရှာဖွေနေခဲ့တယ်။ Yang jianတစ်ယောက် ကြာပန်းမီးအိမ်ကို ရှာတွေ့ပြီးတော့ အမှောင်နတ်ဆိုးကိုနှိမ်နင်းနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi The Magic Lotus Lanternဇာတ္ကားမွာေတာ့ Yang Jianဟာ နတ္ဘုရားမနဲ႔လူသားတစ္ေယာက္က ေမြးဖြားလာသူျဖစ္တာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘုံက နတ္ဘုရားေတြက သူ႔ကိုမေကာင္းဆိုးဝါးတစ္ေယာက္လို ဆက္ဆံၾကတယ္။ေကာင္းကင္ဘုံရဲ႕ရတနာပစၥည္းၾကာပန္းမီးအိမ္အခိုးခံရလိုက္တဲ့အတြက္ အေစာင့္အၾကပ္ေတြက Yang jianကိုသူခိုးလို႔ထင္ကာ ဖမ္းဆီးၾကတဲ့အတြက္ Yang Jianတစ္ေယာက္ထြက္ေျပးရင္းနဲ႔ မေသမ်ိဳးကမာၻကိုေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ Wanlingၿမိဳ႕က မိန္းမလွေလး ...
IMDB: 6.5/10 4721 votes
Bhajarangi2(2021) (App member only) ##unicode Bhajarangi 2ဇာတ်ကားမှာတော့ Anjiဟာ လက်ထပ်သွားတဲ့ အမဖြစ်သူ Alamelammaနေတဲ့ ရွာလေးကို ရောက်လာခဲ့တယ်။Anjiအမကတော့ ငွေတိုးချေးစားလုပ်ကာ ရွာမှာမင်းမူနေသူဖြစ်ပါတယ်။ Anjiဟာ သတို့သမီးရှာဖို့အတွက် ရွာကိုရောက်လာကြောင်းပြောပြလိုက်သောအခါ အမဖြစ်သူ Alamelammaက Anjiကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ လက်ထပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ Chinminikiကတော့ Alamelammaကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ သတ္တိခဲကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ Alamelammaက အတိုးနှုန်းအများကြီးယူပြီးတော့ ဆင်းရဲသားတွေကို နှိပ်စက်နေတာကိုမကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ Chinminikiတစ်ယောက် Anjiကိုအသုံးချကာ Alamelammaကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Anjiကို ဆွဲဆောင်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Anjiရဲ့ကြင်နာသနားတတ်တဲ့စိတ်ကို သိသွားတဲ့ Chinminikiဟာ Anjiကို တကယ်သဘောကျသွားခဲ့တယ်။ Alamelammaကလဲ သူ့မောင်သဘောကျသွားတဲ့ မိန်းကလေးကိုလက်ထပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတာကြောင့် Anjiတို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Arakaလို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်ယောက်က ရွာကိုရောက်လာပြီးတော့ Alamelammaနဲ့ Chinminikiအပါအဝင်ရွာက အမျိုးသမီးတွေကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတော့တယ်။ Anjiတစ်ယောက်သူအမနဲ့ချစ်သူကို ဘယ်လိုပြန်ကယ်ဆယ်မလဲဆိုတာကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Bhajarangi 2ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Anjiဟာ လက္ထပ္သြားတဲ့ အမျဖစ္သူ Alamelammaေနတဲ့ ႐ြာေလးကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။Anjiအမကေတာ့ ေငြတိုးေခ်းစားလုပ္ကာ ႐ြာမွာမင္းမူေနသူျဖစ္ပါတယ္။ Anjiဟာ သတို႔သမီးရွာဖို႔အတြက္ ႐ြာကိုေရာက္လာေၾကာင္းေျပာျပလိုက္ေသာအခါ အမျဖစ္သူ Alamelammaက Anjiႀကိဳက္တဲ့မိန္းကေလးနဲ႔ လက္ထပ္ေပးမယ္လို႔ကတိေပးခဲ့တယ္။ Chinminikiကေတာ့ Alamelammaကို ဆန႔္က်င္ေနတဲ့ သတၱိခဲေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ Alamelammaက အတိုးႏႈန္းအမ်ားႀကီးယူၿပီးေတာ့ ဆင္းရဲသားေတြကို ႏွိပ္စက္ေနတာကိုမေက်မနပ္ျဖစ္ေနတဲ့ Chinminikiတစ္ေယာက္ Anjiကိုအသုံးခ်ကာ ...
IMDB: 8.3/10 628 votes
8-Bit Christmas (2021) (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ဒီနှစ်ရဲ့ခရစ်စမတ်အတွက်အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ခရစ်စမတ်ဟာသဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် How I met Your mothers seriesရဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသား Neil Patrick Harris ပါဝင်ထားပြီး ကလေးသရုပ်ဆောင် Winslow Fegleyရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်မှု ဟာသလေးတွေနဲ့ဇာတ်ကားအဆုံးထိဆွဲခေါ်သွားနိုင်မယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉၈၀ခုနှစ် ချီကာဂိုမှာ နင်တန်ဒိုဆိုတဲ့ဂိမ်းစက်က နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းစက်တစ်ခုပေါ့ ကလေးတိုင်းက အဲဒီဂိမ်းစက်ကို ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အနေနဲ့လိုချင်ခဲ့ကြတယ် ဒီအထဲမှာ ၁၁နှစ်အရွယ် ဂျိတ်ကတော့ အဲဒီဂိမ်းစက်ကိုအရူးသွပ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် သူတို့မြို့မှာ အဲဒီဂိမ်းစက်ကလည်း တင်မီဆိုတဲ့ အကျင့်ဆိုးတဲ့သူဌေးသားဆီမှာပဲရှိခဲ့တာကြောင့် သူ့ဆီသွားပြီးဂိမ်းစက်ငမ်းဖို့ ဂျိတ်နဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေမှာ အသေအလဲကိုကြိုးစားခဲ့ရပါတယ် မိဘတွေဆီကနေ အဲဒီဂိမ်းစက်ကို ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ် ဘယ်လိုရအောင်တောင်းရမလဲဆိုတာလည်း သူတို့မှာ ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးအဖြေရှာရတာအမြဲပါပဲ မိဘတွေမဝယ်ပေးရင်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဂိမ်းစက်ရအောင်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အကြံတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့အလွဲတွေကို ဒီဇာတ်ကားမှာ ရယ်ရယ်မောမောမြင်တွေ့ရမှာပါ ခရစ်စမတ်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ပုံစံအတိုင်း ဒီဇာတ်ကားလေးကလည်း ကြည်နူးစရာဇာတ်ကားလေးဖြစ်လို့ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ ဒီႏွစ္ရဲ႕ခရစ္စမတ္အတြက္အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ ခရစ္စမတ္ဟာသဇာတ္ကားေကာင္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ How I met Your mothers seriesရဲ႕ နာမည္ႀကီးမင္းသား Neil Patrick Harris ပါဝင္ထားၿပီး ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ ...
Churuli (2021) (App only) ##unicode Churuliဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာတော့ ရဲနှစ်ယောက်သာ 10နှစ်လောက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့ Joyဆိုတဲ့ ဝရမ်းပြေးကို ဖမ်းဆီးဖို့အတွက် Churuliဆိုတဲ့ ရွာကို အလုပ်သမားတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကာ ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရွာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Joyက ရွာမှာမရှိနေတဲ့အတွက် ရွာကအရက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ကာ Joyကိုစောင့်ဖမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရွာမှာနေတာ အချိန်ကြာလာလေ အဲ့ရွာက လူတွေအားလုံးက ဝရမ်းပြေးတွေဖြစ်ကြောင်းကို သိခဲ့ရတယ်။ရွာက တောကြီးမျက်မည်းထဲမှာရှိနေတဲ့အပြင် ရွာက ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိခဲ့ကြတယ်။ဒီရဲသားနှစ်ယောက် တောကြီးမျက်မည်းထဲက ရွာမှာ Joyဆိုတဲ့ ဝရမ်းပြေးကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဖမ်းမိပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Churuliဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားမွာေတာ့ ရဲႏွစ္ေယာက္သာ 10ႏွစ္ေလာက္ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနတဲ့ Joyဆိုတဲ့ ၀ရမ္းေျပးကို ဖမ္းဆီးဖို႔အတြက္ Churuliဆိုတဲ့ ႐ြာကို အလုပ္သမားေတြအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ကာ ေရာက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔႐ြာကိုေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ Joyက ႐ြာမွာမရွိေနတဲ့အတြက္ ႐ြာကအရက္ဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္ကာ Joyကိုေစာင့္ဖမ္းဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။သူတို႔႐ြာမွာေနတာ အခ်ိန္ၾကာလာေလ အဲ့႐ြာက လူေတြအားလုံးက ၀ရမ္းေျပးေတြျဖစ္ေၾကာင္းကို သိခဲ့ရတယ္။႐ြာက ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲမွာရွိေနတဲ့အျပင္ ႐ြာက ထူးဆန္းတယ္ဆိုတာကို သတိထားမိခဲ့ၾကတယ္။ဒီရဲသားႏွစ္ေယာက္ ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲက ႐ြာမွာ Joyဆိုတဲ့ ၀ရမ္းေျပးကို အႏၲရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ဖမ္းမိပါ့မလားဆိုတာ ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet ...
IMDB: 8.5/10 95 votes
Kaamelott – The First Chapter (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ ရှေးစတိုင်အပြင်အဆင်တွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပြင်သစ်ဟာသဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ် Kaamelottဆိုတဲ့ seriesအပြီးမှာ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရထားပြီးသားပါ Kaamelott seriesအဆုံးသတ်မှာထီးနန်းကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားရတဲ့ ဘုရင် Arthurဟာ ဒီဇာတ်ကားမှာပြန်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် သူထွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဟောင်းဖြစ်သူ ဘုရင် Lancelotဟာ အခွန်အခတွေတိုးကောက် ပြည်သူတွေကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ကလေးတွေကိုပါမချန်သေဒဏ်ပေးတာတွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဘုရင်ဆိုးကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ အရင်ဘုရင်ဟောင်း Arthurကိုပဲတမ်းတပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ် ထီးနန်းရေးရာကိစ္စတွေကိုစိတ်ကုန်သွားတဲ့ Arthurကလည်း တိုင်းပြည်အရေးမှာမပါဝင်ခဲ့ချင်တော့ပါဘူး ဒါပေမယ့်လည်း အမှုထမ်းကောင်းတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် တော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပြီး ဘုရင် Arthur တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုပြန်သိမ်းပိုက်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ေရွးစတိုင္အျပင္အဆင္ေတြနဲ႔႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ျပင္သစ္ဟာသဒရာမာဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္ပါတယ္ Kaamelottဆိုတဲ့ seriesအၿပီးမွာ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ထြက္ရွိလာတဲ့ဇာတ္ကားျဖစ္လို႔ ပရိသတ္အခိုင္အမာရထားၿပီးသားပါ Kaamelott seriesအဆုံးသတ္မွာထီးနန္းကိုစြန႔္ၿပီးထြက္ေျပးသြားရတဲ့ ဘုရင္ Arthurဟာ ဒီဇာတ္ကားမွာျပန္လာေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္ သူထြက္သြားခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းျဖစ္သူ ဘုရင္ Lancelotဟာ အခြန္အခေတြတိုးေကာက္ ျပည္သူေတြကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ ကေလးေတြကိုပါမခ်န္ေသဒဏ္ေပးတာေတြလုပ္ေနခဲ့ပါတယ္ဒီလိုဘုရင္ဆိုးကိုလက္မခံႏိုင္တဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ အရင္ဘုရင္ေဟာင္း Arthurကိုပဲတမ္းတၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္ ထီးနန္းေရးရာကိစၥေတြကိုစိတ္ကုန္သြားတဲ့ Arthurကလည္း တိုင္းျပည္အေရးမွာမပါဝင္ခဲ့ခ်င္ေတာ့ပါဘူး ဒါေပမယ့္လည္း အမႈထမ္းေကာင္းေတြရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးကိုဦးေဆာင္ၿပီး ဘုရင္ Arthur တိုင္းျပည္ကို ဘယ္လိုျပန္သိမ္းပိုက္မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ္ကားမွာျမင္ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္လို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Review – ...
IMDB: 7.0/10 1,843 votes
Star (2021) (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အသစ်ထွက် Mystery Thriller ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အာဒရာသားသမီးသုံးယောက်နဲ့အတူခင်ပွန်းသည်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်အာဒရာဟာတစ်ရက်မှာတော့ရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းလဲသွားပါတယ် အရင်လိုရွှင်ရွှင်ပျပျလည်းမရှိတော့ဘဲ တစ်ခါတစ်ရံဒေါသတကြီးလည်းပြုမူလာတတ်ပါတယ် အာဒရာရဲ့အခြေအနေဟာတစ်နေ့တစ်ခြားဆိုးရွားလာပြီး တစ်ခါတစ်လေထူးဆန်းပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေပါတွေ့လာရတဲ့အချိန်မှာတော့... အာဒရာတစ်ယောက်ဘာလို့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားရတာလဲ အာဒရာတို့မိသားစုလေးထဲမှာ ဘယ်လိုပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့အသစ္ထြက္ Mystery Thriller ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ အာဒရာသားသမီးသုံးေယာက္နဲ႔အတူခင္ပြန္းသည္နဲ႔ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္အာဒရာဟာတစ္ရက္မွာေတာ့႐ုတ္တရက္ႀကီးေျပာင္းလဲသြားပါတယ္ အရင္လို႐ႊင္႐ႊင္ပ်ပ်လည္းမရွိေတာ့ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံေဒါသတႀကီးလည္းျပဳမူလာတတ္ပါတယ္ အာဒရာရဲ႕အေျခအေနဟာတစ္ေန႔တစ္ျခားဆိုး႐ြားလာၿပီး တစ္ခါတစ္ေလထူးဆန္းၿပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့အျပဳအမူေတြပါေတြ႕လာရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့... အာဒရာတစ္ေယာက္ဘာလို႔ဒီလိုေျပာင္းလဲသြားရတာလဲ အာဒရာတို႔မိသားစုေလးထဲမွာ ဘယ္လိုျပႆနာေတြႀကဳံေတြ႕ရဦးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL,720p WEB-DL Genre : Fantasy,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
Monkey King Reborn (2021) ##unicode လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်း‌ပေါင်းများစွာက ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ပထမဆုံးနတ်ဆိုးတပါး မွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူ့နာမည်က ယွမ်တိ ။ သူဟာကမ္ဘာလောကကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးသော နတ်ဆိုးဘိုးအေကြီးလည်းဖြစ်တယ် နောင်နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာပီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဝူခုန်းတို့ ဆရာတပည့် တွေက ကျမ်းစာပင့်ဖို့ အနောက်အရပ်သို့ခရီးနှင်ရင်း မြေစောင့်နတ်ကြီး တစ်ပါးရဲ့ စံနန်းတော်ကို ဝင်နားမိခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီ့ချိန်မှာပဲနတ်ဆိုးမိစ္ဆာဘိုးအေကြီးယွမ်တိဟာတဖန်ပြန်လည်အသက်ဝင်‌‌ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ် အလွန်စွမ်းအားကြီးမားလွန်းတဲ့နတ်ဆိုးကြီးဟာ ဘာလို့ပြန်‌လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလဲ၊ နတ်ဆိုးကြီးက ဆရာတော်တို့ကိုဘယ်လို ဒုက္ခ‌ ပေးမလဲ ဝူခုန်းကရော သူ့ဆရာ‌တော်ကို‌ စောင့်‌ရှောက်နိုင်ပါ့မလား သူ့ထက်စွမ်းအားကြီးမားလွန်းတဲ့ နတ်ဆိုးကြီးကိုရော ရင်ဆိုင်ချေမှုန်းနိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာကို.... အရမ်းမိုက်တဲ့ အန်နီမေးရှင်း အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ ရှုခင်းတွေ တိုက်ခန်း ခိုက်ခန်း‌‌တွေပါဝင်ပြီး ပီပြင်ပြောင်မြောက်တဲ့ ဒီကာတွန်းကား‌လေးမှာပရိတ်သတ်ကြီးဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်နော် ၊ ကာတွန်းဆိုပေမယ့် မျက်နှာ အမူအရာ ခံစားချက်ဖော်ပြပုံ တွေက ပီပြင်ကြည့်ကောင်းလွန်းတာကြောင့် ကြည်နူးနှစ်သက်စရာကောင်းပြီး ကြည့်ရတာ တကယ်တန်စေမယ့် ကားလေးပါ.. ##zawgyi လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သန္း‌ေပါင္းမ်ားစြာက ေကာင္းကင္နဲ႔ေျမႀကီးစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ပထမဆုံးနတ္ဆိုးတပါး ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ သူ႔နာမည္က ယြမ္တိ ။ သူဟာကမာၻေလာကကို ေရာက္လာခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးေသာ နတ္ဆိုးဘိုးေအႀကီးလည္းျဖစ္တယ္ ေနာင္ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ဝူခုန္းတို႔ ဆရာတပည့္ ေတြက က်မ္းစာပင့္ဖို႔ အေနာက္အရပ္သို႔ခရီးႏွင္ရင္း ေျမေစာင့္နတ္ႀကီး တစ္ပါးရဲ႕ စံနန္းေတာ္ကို ...
The Monkey King: Demon City (2018) (App premium only) ##unicode အနောက်အရပ်ကို ကျမ်းစာသွားယူကြမယ့် ဝူခုန်းတိုဟာ ခရီးလမ်းမှာ မကောင်းဆိုးဝါးလက်ထဲမှာ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ဆရာတော်ကို သွားကယ်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဆရာတော်ကို ဖမ်းထားတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးကတော့ သဲကန္တာရရဲ့ ဟိုးအနက်ဆုံးတစ်နေရာမှာ ပုန်းကွယ်နေပြီး အနီးနားရှိ ရွာလေးကနေ တစ်နှစ်တစ်ခါပြုလုပ်ပေးတဲ့ ယဇ်ပူဇော်ပွဲမှသာ ပေါ်လာတတ်တာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင် အဲဒီကန္တာရကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်ကြတဲ့ ခရီးသည်တွေကိုလည်း ဖမ်းဆီးစားသောက်တတ်ပါတယ် ဆရာတော်ကိုတော့ ဝူခုန်းကို မျှားခေါ်ဖိုအတွက် ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီး ထိုမကောင်းဆိုးဝါးက သူ့ရဲ့စွမ်းအင်တွေတိုးပွားလာရေးအတွက် ဝူခုန်းရဲ့ကျောက်နှလုံးကို ရမှဖြစ်မယ်လို ယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ် အဲဒီမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့လက်ထဲကနေ ဝူခုန်းတစ်ယောက် ဆရာတော်ကို ဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဆိုတာကို ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်လက်ကြည်ရှုကြပါအုံး ##zawgyi အေနာက္အရပ္ကို က်မ္းစာသြားယူၾကမယ့္ ဝူခုန္းတိုဟာ ခရီးလမ္းမွာ မေကာင္းဆိုးဝါးလက္ထဲမွာ အဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့ ဆရာေတာ္ကို သြားကယ္ၾကမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ ဆရာေတာ္ကို ဖမ္းထားတဲ့ မေကာင္းဆိုးဝါးကေတာ့ သဲကႏၲာရရဲ႕ ဟိုးအနက္ဆုံးတစ္ေနရာမွာ ပုန္းကြယ္ေနၿပီး အနီးနားရွိ ႐ြာေလးကေန တစ္ႏွစ္တစ္ခါျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ယဇ္ပူေဇာ္ပြဲမွသာ ေပၚလာတတ္တာျဖစ္ပါတယ္ ဒါ့အျပင္ အဲဒီကႏၲာရကိုျဖတ္သြားျဖတ္လာလုပ္ၾကတဲ့ ခရီးသည္ေတြကိုလည္း ဖမ္းဆီးစားေသာက္တတ္ပါတယ္ ဆရာေတာ္ကိုေတာ့ ဝူခုန္းကို မွ်ားေခၚဖိုအတြက္ ဖမ္းဆီးထားတာျဖစ္ၿပီး ထိုမေကာင္းဆိုးဝါးက သူ႔ရဲ႕စြမ္းအင္ေတြတိုးပြားလာေရးအတြက္ ဝူခုန္းရဲ႕ေက်ာက္ႏွလုံးကို ရမွျဖစ္မယ္လို ယုံၾကည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီမေကာင္းဆိုးဝါးရဲ႕လက္ထဲကေန ဝူခုန္းတစ္ေယာက္ ဆရာေတာ္ကို ဘယ္လိုကယ္တင္မလဲဆိုတာကို ဇာတ္ကားထဲမွာ ...
IMDB: 6.8/10 47512 votes
The Monkey King: Demon City (2018)
The Legend of Deification (2021) (App member only) ##umicode လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက Chihou ဟာ Huangdi ကိုရှုံးနိမ့်ပြီး နေရာအနှံ့မှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့အတူ သက်ဆိုင်ရာကိုးကွယ်မှုတွေ အင်အားကြီးလာခဲ့တယ် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ KunLun မှ Lijing ကို တောင်အောက်အရပ်တွေဆီ ဆင်းစေပြီး မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုနှိမ်နင်းစေခဲ့ပါတယ် ထိုမကောင်းဆိုးဝါးနှိမ်နင်းရေးခရီးစဉ်မှာတော့ Lijing နဲ့အတူ ပညာရှိ JiangZiya ၊ မိန်းကလေး FengShi နဲ့ နဂါးကြီး Ao Guang တို့ပါအသီးသီးပါဝင်လာကြပါတယ် ကမ္ဘာကြီးကို မကောင်းဆိုးဝါးအငွေ့အသက်တွေနဲ့ပြည့်ပြီး ငရဲအသွင်ပြောင်းသွားအောင် ကျင့်ကြံယူနေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးကြီးဆီမှ Lijing တို့ ၄ယောက် ဘယ်လိုကြိုးစားကယ်တင်ကြမလဲဆိုတာကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ effect ကောင်းကောင်းနဲ့ အလန်းရိုက်ချက်တွေနဲ့ ကြည့်ရမယ့်တရုတ်သိုင်းကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက Chihou ဟာ Huangdi ကိုရႈံးနိမ့္ၿပီး ေနရာအႏွံ႔မွာ မေကာင္းဆိုးဝါးေတြနဲ႔အတူ သက္ဆိုင္ရာကိုးကြယ္မႈေတြ အင္အားႀကီးလာခဲ့တယ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ KunLun မွ Lijing ကို ေတာင္ေအာက္အရပ္ေတြဆီ ဆင္းေစၿပီး မေကာင္းဆိုးဝါးေတြကိုႏွိမ္နင္းေစခဲ့ပါတယ္ ထိုမေကာင္းဆိုးဝါးႏွိမ္နင္းေရးခရီးစဥ္မွာေတာ့ Lijing နဲ႔အတူ ပညာရွိ JiangZiya ၊ ...
IMDB: 5.6/10 1247 votes